Inkbrush qalab bilaash ah oo lagu dhiso emaylladaada | Abuurista khadka tooska ah
Inkbrush qalab bilaash ah oo lagu dhiso emaylkaaga
Inkbrush, waa aalad khadka toosan oo awood badan leh oo dhinacyo badan kuu sahlaysa inaad si fudud u adeegsato ka beddelo naqshadaha e-maylkaaga sawirrada qaab-dhismeedka dhabta ah ee HTML.
Es bilaash ah oo aad u fudud in la isticmaalo, Abuuritaanka emayllada ayaa la caawiyey natiijaduna waa xirfadle. Dhamaadka hawsha, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku darto shaxanka barnaamijka maraakiibta ama adeegga aad doorbidayso.
Kadib markaad iska diiwaangeliso Inkbrush, adiga waxaad ku shubi kartaa naqshadahaaga, png, jpg ama si toos ah psd, u bixi magac haddii aad rabto calaamadeyn, sidan ayaad u abaabuli kartaa joornaalka aad la shaqeyneyso oo aad si fudud ugu heli kartaa mustaqbalka.
Xulashada qaabeynta, in kastoo ay umuuqdaan kuwo aasaasi ah, waa kuwa si sax ah loogu baahan yahay shaqadan noocan ah, waxaan dooran karnaa noocyada kala duwan iyo midabada asalka, qalab fudud oo muuqaal ah ayaa noo oggolaanaya inaan u jarno emaylka qaybo badan oo aan u baahanahay, oo aan ku dari karno "qoraalka alt" iyo ficillada qaab xiriiriye ah.
Qalabka waxaa ku jira imtixaan iswaafajin ah oo loogu talagalay nidaamyada ugu caansan ee waraaqaha iyo wakiillada, oo sidaas darteed hubso in rarka loo sameynayo sida aan dooneyno, waxaan sidoo kale heli karnaa horudhac oo waxaan ku sameyn karnaa tijaabo cinwaan kasta oo aan tilmaano; Inkbrush waxay ogyihiin in marki shixnadan la sameeyo aysan jirin duulimaad dib u dhac ah waana taas sababta ay noo siinayaan tas-hiilaadyo badan oo aan ku xaqiijin karno waqti kasta inaan wax ku qabanayno si sax ah.
Mar alla markii aan helno joornaalkeenna shaqsiyeed, jar iyo ficillada la dejiyey, waxaan haysannaa dhowr ikhtiyaar oo aan ku dhoofinno:
Mid ka mid ah waa kala soo bax HTML-ga iyo sawirrada ka dhashay oo tilmaamaya halka aan martigalin doonno faylasha, sidan oo kale barnaamijka 'Inkbrush' waxaa ku jiri kara dariiqyada saxda ah ee sawirrada ku jira shaxanka, oo waxaan kaliya ku soo dejin karnaa faylalka adeegeena FTP.
Inkbrush sidoo kale wuxuu leeyahay isdhexgalka Amzazon S3, server-ka caanka ah ee loo yaqaan 'Amazon image server'. Iyadoo la adeegsanayo laba guji oo fudud isla markaana la dhigayo koodhkeena 'Amazon code' waxaan martigelin doonnaa dhammaan sawirrada ololaha emaylka.
La la-qabsashada Ololaha Kormeerka iyo MailChimp, waxay noo ogolaaneysaa inaan soo dejino warsidaha horey loogu diyaariyey labadan madal, si aan si dhaqso leh oo fudud ugu darno. Adeegyadan warsidahan diraya waxay bixiyaan xalal xirfadaysan, MailChimp-na si gaar ah ayey u leedahay qiimeyaal tartan badan.
Haddii aad isku daydo Inkbrush ma ka qoomameyn doontid, qalabku runtii waa sahlan yahay in la isticmaalo, aad u shaqeynaya oo gebi ahaanba bilaash ah. Gudaha saddex tallaabo oo aasaasi ah oo lagu abuuro emayl kuwaas oo ah, qaabeyn, qaabeyn iyo gaarsiin, Inkbrush wuxuu ku xallin doonaa qaabeynta natiijo weyn oo lagu qanco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » HTML » Inkbrush qalab bilaash ah oo lagu dhiso emaylkaaga
Aad baad u mahadsan tahay oo aad wax ku ool ah
Farshaxanka weyn ee ku yaal Florence oo qarinaya qolal kala duwan
20 naqshado kaararka ganacsiga asalka ah oo ganacsigooda caan ka dhigay